Boqolaal Muhaajiriin ah oo ku geeriyootay badda Mediterranean ee dalka Libya 3-11-2016 | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Boqolaal Muhaajiriin ah oo ku geeriyootay badda Mediterranean ee dalka Libya 3-11-2016
Ugu yaraan 240 tahriibayaal ah ayaa ku geeriyootay badda Mediterraneanta ee xeebaha dalka Libya kadib markii ay la degeen 2 doon oo ay saarnaayeen.
Hay’adda muhaajiriinta QM ayaa sheegtay in koox muhaajiriin ah oo ay ku jiraan 20 dumar ah iyo 6 caruur ah ay dooni yar ka raaceen xeebaha Libya Arbacadii, balse ay doonidaasi saacaddo kadib badda kula dagtay.
Wararka ayaa sheegaya in shaqaalaha gurmadka markii ay halkaasi gaareen, inta badan kooxdaasi ay baddu liqday, waxaana la helay maydka 12 qof, oo ay ku jiraan saddex caruur ah. 27 qof ayaa la sheegayaa inay shilkaasi ka bad-0baadeen.
Shil kalena, laba haween ah ayaa bad-baaday markii dooni ay iyaduna isla wakhtigaasi badda ku dagtay. Doonidaasi yar waxaa saarnaa 130 qof. Inta badan dadka ku dhintey labadan doon ayaa waxa ay ahaayeen tahriibayaal ka soo jeeda wadamada geeska Afrika.
Hay’adda IOM ayaa sheegtay in 4220 qof ay sannadkan badda Mediterranean-ka ku dhinteen, iyadoo sannadkii horena ay isla baddaasi ku dhinteen 3777 qof.
Dadka wax tahriibiya ayaa la sheegay inay ku soo raraan dooman yaryar dad ka badan inta ay qaadi karaan,waxayna mararka qaarkood badda galaan iyadoo cimilada aysan wanaagsanayn
Boqolaal Muhaajiriin ah oo ku geeriyootay badda Mediterranean ee dalka Libya 3-11-2016 was last modified: November 3rd, 2016 by warsan radio
Akhriso:-Warsaxaafadeed uu ka soo saaray Guddiga Difaaca Golaha Shacabka Xaalada Degmada Beled Xaawo.